IBM President Says Chips Shortage nwere ike ịdị afọ abụọ ọzọ | Esi m mac
Okpomoku ohuru na eriri waya
Dika onye isi oche IBM Jim Whitehurst kọwara na BBC, ụkọ Chips nwere ike ịga afọ abụọ ọzọ. Technologylọ ọrụ teknụzụ ndị ama ama ama na Apple n'oge gara aga maka ọganiihu na irere kọmputa nkeonwe na-akọwa na atụmatụ ya bụ mfu karịa Ijeri $ 110.000 na afọ a na mpaghara akụrụngwa n'ihi enweghị akụrụngwa.
Mana ọ bụ na ụlọ ọrụ teknụzụ anaghị agụpụ na nsogbu yana ezi uche ekwesịrị ịsị na nsogbu mgbawa na microchip ndị na-abanye n'ime ngwaọrụ elektrọnik niile anyị na-eji ụbọchị anyị taa.
Site na mbubata ụgbọ mmiri na-egbu oge na ụkọ na usoro mmepụta
Na njedebe, ihe onye na-azụ ahịa hụrụ bụ na mbupu ahụ na-ewe ogologo oge karịa ka a tụrụ anya ya nakwa na usoro mmepụta enweghị ike inweta ihe mejupụtara iji kpokọta ngwaọrụ na nke a pụtara na igbu oge ogologo oge nke mbupu.
Anyị na-ahụ ya na consoles, ụgbọala, kọmputa, ekwentị, akụrụngwa na ụdị ngwaọrụ elektrọnik niile. O doro anya na nke a bụ nsogbu maka ndị nrụpụta na maka ndị ọrụ onwe ha, ndị nwere nkụda mmụọ n'ọchịchọ ịzụta ngwaahịa n'ihi ụkọ.
Ọ bụrụ na ugbu a, anyị na-aga na atụmanya nke igbu oge bụ maka ogologo oge na ụfọdụ echeworị na ọ ga-adịru afọ ole na ole dịka ọ dị maka onye isi ala nke IBM ọ na-akawanye njọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Onye isi ala IBM kwuru na ụkọ mgbawa nwere ike ịnọ afọ abụọ ọzọ